Saturn kwiNdlu yesithandathu (okanye i-Virgo)
Indlu yesithandathu (okanye iVirgo)
Ukulwa: Iipateni zokuzihlambalaza; ukukhanyela iimfuno zakho; umsebenzi osongela impilo; u xanduva; ukukhonza abanye ngeendleko zobuqu.
Isikhuthazo: Umkhuba ohlambululayo; Uthi Hayi xa usuphelile; ukuxilisa; ukuxhalabisa; usuku olufanelekileyo lomsebenzi.
Xa iSaturn yakho isendlwini yesithandathu, umzabalazo wakho ngowomsebenzi wemihla ngemihla evakalelwa yindoda.
Umxholo ulungelelanisa izithako ezifanelekileyo kwisigqi esipheleleyo nesigqibeleleyo. Unomqhubi onamandla, kwaye udla ngokugqithisa kakhulu kwiplate yakho. Isifundo sokuphila konke kukubona ukubaluleka kokuthatha lula, kwaye uzinike ikhefu.
Igama elilodwa lineengcambu ezifanayo kunye nokucoceka. Kwaye enye inkxalabo ephezulu kukuhlambulukileyo-ukukwazi ukuhlambulula, ukuhlambalaza kunye nemoya. Unokuba ngumngcipheko malunga nomyalelo kwikhaya lakho. Ingxaki kuphela, xa kukho ukwesaba into engekho kwindawo. Ukuzigcina uhlelekile kukukwenza uzive ulawulwa. Kodwa xa kuba yinto enzima, yilapho ithatha umthwalo wayo.
Kungenzeka ukuba unokukhushulwa, okanye ungenalo ithuba lokwenza ukhetho oluphilileyo. USaturn unendlela enomdla wokusibuza ukuba sihambe ngaphaya komntu oqhelekileyo, ukudala isakhiwo esitsha. Isimo se-quo sinokukubulala, nokudala izifo. Kodwa ukuqhekeza le miqobo kubangela ukwesaba, kwaye ukutshintshwa kwabo kunye neempilweni kuthatha isibindi.
Ukutshatyalaliswa ngokwenene uyancuma xa kukho ulandelelwano kunye nenkqubela eqhubekayo imihla ngemihla. Kodwa ukuxuba, kunye nokwenza utshintsho xa kuyimfuneko, kukhokelela kumhla ojikeleze. Unokuba ngumntu onobuchule kulolu hlobo lokucoca. Izakhono zakho zentlangano zinokuba abanye bekhangele kuwe ukuba bafumane iingcebiso!
Ukusuka kwiLiz Green's classic Saturn: Ukukhangela okusha kwi-Old Devil "Ngokuqhelekileyo iSaturn ifakwe kwisithandathu ibhekisela kwisimo sesifo, ukuphazamiseka okanye ukuphazamiseka nokunciphisa umgangatho womsebenzi.
Isidingo esisisiseko sengqondo sesingoma kunye nesithethe, ukulawulwa ngokucokisekileyo kokuphila kwangaphandle njengomqondiso wokulumkisa ngokucophelela ubomi obunzulu obufanele, kwaye ngokungafanekiyo, bube bunqatshelwe ebuntwaneni. Le mfuneko iyasebenza kwaye iyinyani njengoko kuyimfuneko yokukhusela okanye yokuphumelela. "
Abanye abaneSaturn baya kwiinkathazo zempilo, kwanjengokuba befuna ukuzitholela emnyango wokufa. USaturn ngumhlaba wokuguga kunye nemida yokuphila. Kwale ndlu, kukho iziganeko ezizisa ekhaya ingqondo / umzimba / umoya wokubambisana.
Isipho sikaSaturn kule meko, sibhekene nokufa, kwaye sijongana nesitya sehlabathi. Le yindlu yomhlaba , kunye neendawo eziphilayo zokuhlala kwindawo (ezityhefu) zibiza umnqweno woqeqesho olukhulu. Kwaye ukusebenzisa ubunzulu bukaSaturn ukuya kwesithandathu, kunokukhokelela kubulumko kwindawo yokuphilisa. Uhambo oluya kubuhle lungakhokelela ekubeni uthathe ingubo yokuphilisa okanye utitshala.
Ukufezeka - Umgibe
Ukuba uSaturn wakho ungowesithandathu, unokuba nzima kuwe. Ukuthambekela kokuzigxeka kunokuba yindlela yokuphila, kwaye kukuphanga uvuyo. Kungenzeka ukuba unembopheleleko enzima njengomntu oselula. Kwaye ungumntu osebenza nzima kwaye ulindele ukuba nabanye basebenze nzima.
Umngeni omkhulu ufumana ukulinganisela phakathi komsebenzi kunye nobomi bakho bonke. Isithunzi sikaSaturn asinasiphelo - ngokwazo okanye kwabanye - kule ndawo. Unokwesaba ukunciphisa umthwalo wakho, okanye ucinge ukuba awufanelekanga ngaphandle kokuba uzalise imisebenzi yakho ngosuku. Injongo eyilumkileyo kukuhlakulela ukuzithemba, ngaphandle kwezinto ozenzayo. Ubomi bakho bomsebenzi bubalulekile kuwe, kwaye ukuba awukuqinisekisi, oku kuyingozi kwimpilo yakho.
Indlu yesithandathu "indlu" yomsebenzi (kunye neyesibini kunye neshumi). Into ehlukile apha yi-Virgo (lo mlawuli wendlu) ukungafani. Oku kuthetha ukuba unako ukulungelelanisa kakuhle, kwaye esi sisipho esihle sokuba nexesha lokutshintsha!
I-Saturn inokudala ukulibaziseka ekubanjweni kwimizamo yakho emsebenzini. Yiba nesineke kwaye ungasebenzisi oku njengesizathu sokuba ube ngumsebenzi osebenzayo.
Zizenzele, uhlale uphilile kwaye ugcine umsebenzi ngendlela efanelekileyo. Umvuzo wakho ubomi obulinganisiweyo, kodwa ukuqatshelwa kwehlabathi kwakhona kwiinkwenkwezi, njengoko usebenza kwiinjongo ezinyathelo-nge-nyathelo.
Iyeshumi Iindlu - IiNdlu zeenkwenkwezi
I-Ninth House (Jupiter)
Saturn kwiNdlu yesixhenxe
Iingoma ezi-10 eziphezulu zokuthanda - Ukuchithwa
Okokugqoka kwi-Baccalaureate kunye nokuFundela
'Porque,' 'Por Qué,' 'Por Que' ne 'Porqué'
I-Lycurgus Lawgiver of Sparta
USaigo Takamori: I-Last Samurai
Inkcazo ye-Acid Definition and Examples (Chemistry)